Shir looga hadlayay oo ammaanka oo lagu qabtay Garowe – Radio Muqdisho
Shir looga hadlayo ammaanka ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe, kaasoo ay ka soo qeyb galeen ururrada bulshada, culimaa’udiinka iyo masuuliyiin uu ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ugu horreyn faah faahin ka bixiyey shirkaas.
“Shirkaan waxa loo qabtay waa shabaab in lala diriro, marka inaga iyo shabaab ma dirirsannahay mise heshiis baa naga dhaxeeye arrintu ma joogto, shabaab waan dagaalsannay heshiisna nagama dhaxeeyo. lkn haddii wax naga qaldanyihiin shacabka ha ahaato ama dawladda ha ahaatee waa la is baraarujinayaa”.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Abdullaahi Cumar Camay oo ka hadlay shirkaas ayaa bulshada ku baraarujiyey inay dawladda kala shaqeeyaan nabadgelyada.
“Weligeen baan isku tashanjirnay waana isku tashandoonnaa, waxaana hubaa inaan ka adkaandoonno iyaga, waxaase loo baahanyahay midnimo inayu yeelanno,midnimaduna ay noqoto inagana qabqabashada iyo laynta noo daaya, idinkaga sheegista iyo far fiiqa aan idiin dayno”.
Wasiirka Amniga Puntland Xasan Cismaan Alloore ayaa isna ka hadlay shirkaas, isagoo wax ka xusay sifooyinka argagixisada iyo dadka u adeega.
“Argagixisadu waa urur aan wax xurmo ah u hayn diin, dhaqan, sharaf iyo wax kasta oo bulshadu ay qadarin u hayso, su’aashu waxay tahay yey adeegsadaan? waxay adeegsadaan dadka sifooyinkaan leh, kuwa gooni socodka ah, dadka cuqdadaha qaba, kuwa noloshu ku adkaatay, dhalin yarada shaqo la’aanta ah, dambiilayaasha, kuwa waxbarashada ka saaqiday iyo kuwo la mid ah”.
Taliya ciidanka difaaca Puntland Siciid maxamed Xirsi ayaa mar uu ka hadlayey dagaalka ay ciidamada Puntland la galeen Argagixisada wuxuu yiri.
“Ciidamada Puntland laga soo bilaabo 2010 ilaa hadda oo ah 2015 waxay guluf dagaal ku qaadeen ayna cagta mariyeen deegaanadii iyo goobihii ay ku sugnaayeen , mar kastana waxay diyaar u yihiin inay ku filnaadaan difaaca dalka”.
Shirkaan ayaa socondoono muddo laba maalmood ah, wuxuuna kusoo beegmayaa xilli deegaanada Puntland laga dareemayo dhaq dhaqaaqyo lagu adkaynayo ammaanka.